Indawo entsha etholakala ngokuphelele iPerth Lotus Retreat - 2Brm
Jabulela indawo emangalisayo kule ndlu elungisiwe kwenye yezindawo zasePerth ezinelanga kakhulu. Izinyathelo ukusuka ePaki, izindawo zokudlela, amabha, ezokuthutha, njll. Lena ngokukhethekileyo ipharadesi labahamba ngezinyawo kanye nelabadlayo, elingenakuqhathaniswa ngokunethezeka nesitayela. Nikeza kufika ku-20% wediski ukuze uhlale isikhathi eside
Ungaphila impilo yasePerth - yase-Australia kule Lotus Retreat ebukekayo endaweni yase-East Victoria Park. Kuyindawo yokuhlala ethule etholakala maphakathi nayo yonke into: - imizuzu ukuya ePerth City, Fremantle, Airport, Beaches, nakuzo zonke izindawo eziheha izivakashi. Njalo ngeSonto ekuseni kunezinyathelo zemakethe zangaphandle. Amathilomu, isitolo segrosa, isikhungo sokuthenga kanye nezindawo eziningi zokudlela zamazwe ngamazwe/zasendaweni seziseduze.
Kunamakamelo okulala ama-2 kanye negumbi lokugezela elikhulu elihlanganyelwe endaweni yokubaleka. Isitoreji esiningi, amakhabethe, okomisa izinwele kanye nensipho/i-shampoo/conditioner. Kunikezwe wonke amalineni ombhede amasha namathawula okugeza.
Ukuze uthole ubumnandi bokulala: Imibhede eyindlovukazi engu-1 + 1 Umbhede ophindwe kabili +1 umbhede usofa + izimo zomoya kanye namafeni.
I-WIFI esheshayo engenamkhawulo yamahhala.
Igumbi lokuhlala lihlanganisa ama-TV nabadlali be-Bluray, ungapheka futhi ulungise ukudla ekhishini elihlome ngokuphelele - Isitofu/Ihhavini, i-microwave, ifriji/ifriji, umshini wokuwasha izitsha, iketela, i-toaster, umshini wekhofi we-Nespresso. Futhi, kufakiwe ikhofi, itiye, izithelo ezintsha nezinongo ukuze ugcizelele noma yikuphi ukudla ofuna ukukulungiselela. Kunegceke lenkantolo lokuhlala ngaphandle.
Igumbi lokuwasha eligcwele elitholakalayo lihlanganisa okokugeza.
Kunendawo yokupaka yamahhala yabangu-2.
Kukhona izitimela zomphakathi ezilula noma izinyathelo zokuhamba zamabhasi, futhi umhlahlandlela wezokuthutha oya kuzo zonke izindawo ePerth unganikezwa mahhala.
Siyazi isifunda sasePerth futhi singanikeza amathiphu, isiqondiso kanye nokuhlala okukhumbulekayo ukuze ukwazi okwengeziwe ngokuvakasha kwakho. Umgomo wethu oyinhloko uwukuqinisekisa ukuthi izivakashi zethu zijabulela uhambo lwazo ngokunethezeka ngangokunokwenzeka.